पर्यटकको सुरक्षाका लागी पर्यटक प्रहरी - ParyatanBazar.com
पर्यटकको सुरक्षाका लागी पर्यटक प्रहरी
पर्यटन बजार१४ श्रावण २०७८, बिहीबार मा प्रकाशित
साउन १४ , काठमाडौँ। के तपाइलाई थाहा छ हाम्रो देशमा पर्यटक प्रहरी छन् भनेर ? धेरैको उत्तर थाहा छैन भन्ने आउन सक्छ। नेपालमा प्रहरीहरु छन् भनेर सबैलाई थाहा छ तर प्रहरीले पनि फरक फरक क्षेत्र बाट सेवा पुर्याइरहेका हुन्छन भनेर हामीमा अनविज्ञ ता हुनु नौलो कुरा होइन।
तिनै फरक तवरले सेवा गर्ने क्रममा पर्यटक प्रहरीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सुरक्षा गर्ने कार्य गर्दछ। नेपाल भ्रमणमा रहेका विदेशी पर्यटकहरुलाई आवश्यक सेवा, सुरक्षा एवं सूचनाहरु उपलब्ध गराउनुका साथै सुरक्षित र सहज वातावरण सृजना गरी पर्यटकहरुलाई पर्न आएका कुनै पनि किसिमका समस्याहरुको समयमै समाधान गरी उनीहरुको नेपाल बसाई सुरक्षित एवं भयरहित रहेको अनुभुती दिलाई दिगो पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य अनुरुप २०३५ सालमा पर्यटक प्रहरीले सेवा गरेको थियो।
हाल नेपालको मुख्य(मुख्य पर्यटकीय स्थालहरु जस्तैः काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र भृकुटीमण्डप, ठमेल, बसन्तपुर, एयरपोर्ट, पशुपती, स्वयम्भु, पाटन, नगरकोट, भक्तपुर र बौद्ध गरी १० स्थानहरुमा पर्यटक प्रहरी कार्यालयहरु रहेका छन् भने उपत्यका बाहिर झापाको काँकडभिट्टा, सोलुखुम्बुको लुक्ला, धनुषाको जानकी मन्दिर, चितवनको सौराहा, पटिहानी, रसुवाको स्याफ्रुवेशी, पर्साको वीरगंज, कास्कीको पोखरा, बिरेठाँटी, धम्पुस र घान्द्रुक, मनाङको चामे, धारापानी, मुस्ताङको जोमसोम, रुपन्देहीको लुम्बिनी, बेलहिया, म्याग्दीको घोडेपानी र तनहुँको बन्दीपुरमा गरी १२ जिल्लाका १८ स्थानहरुमा पर्यटक प्रहरी कार्यालयहरू स्थापना भई सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
के काम गर्छन पर्यटक प्रहरीले ?
पर्यटकहरु माथि हुन सक्ने हैरानी, अभद्र व्यवहार आदिको रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्ने, पर्यटकीय स्थानहरुमा सुरक्षाको अनुभूती दिलाउन, दैनिक सवारी तथा पैदल गस्ती गर्ने र घुमन्ते, मगन्ते, सडक बालबालिकाहरुलाई पर्यटकबाट टाढा राख्ने, पर्यटकहरु उपर हुने ठगी, कुटपिट, चोरी जस्ता सामान्य अपराधिक घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाहीको लागि सम्वन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउने, पर्यटकहरुको सामान हराएमा, चोरी भएमा सम्बन्धित स्थानका स्थानिय प्रहरीसँग समन्वय गरी प्रहरी प्रतिवेदन उपलव्ध गराउनुका साथै पर्यटक प्रहरीले देहायका कार्य गर्दै आईरहेको छ ।
पर्यटकहरुबाट आएको उजूरी, निवेदन उपर छानविन र कारवाही सम्बन्धी कार्य ।
पर्यटकीय क्षेत्रमा सवारी साधन तथा पैदल गस्ती सम्बन्धी कार्य ।
पर्यटकको लागि आवश्यक सूचनाको प्रवाह सम्बन्धी कार्य ।
ईजाजत बेगर काम गर्ने टुर गाईड गर्नेहरु माथि नियन्त्रण र कारवाही सम्बन्धी कार्य ।
फौजदारी अपराध सम्वन्धमा सम्वन्धित राजदुतावाससँग सम्पर्क राखी स्थानीय प्रहरी कार्यालयहरु मार्फत कारवाही अगाडि बढाउने सम्बन्धी कार्य ।
गर्ने र पर्यटकीय स्थलहरुमा उनीहरुको चलखेलमा कमी ल्याउने सम्बन्धी कार्य ।
होटल, ट्राभल्स, ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ एजेन्सीहरुको निरीक्षण, प्रतिवेदन र कारवाही सम्बन्धी कार्यमा पर्यटन विभागलाई सहयोग पुर्याउने ।
पर्यटकहरुको बिरुद्धमा पर्यटन व्यवसायीहरुबाट आएको गुनासो छानविन, कारवाही र समझदारी सम्बन्धी कार्य ।
पर्यटकलाई किन पर्यटक प्रहरी ?
– पर्यटकहरुलाई आवश्यक पर्यटन सम्बन्धी सूचना प्रदान गर्ने ।
– पर्यटकीय स्थानमा सुरक्षित वातावरण सृजना गर्न नियमित गस्ति गर्ने ।
– समस्यामा परेका पर्यटकहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।
– पर्यटकहरुलाई झन्झटमुक्त वातावरण तयार गर्न हकर्स र पेड्लर्स तथा माग्नेहरुलाई दुरुसाहित गर्ने ।
– पर्यटकीय महत्वको क्षेत्रम कुनै पनि अभद्र व्यवहार, अश्लिल तथा अवाञ्छित कृयाकलाप गर्ने व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारवाहीको लागी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने ।
– पर्यटकहरुबाट आएका उजुरी दर्ता गरी सो को प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार अनुसन्धानको लागि स्थानीय प्रहरी कार्यालयलाई लेखि पठाउने ।
– पर्यटकहरुको सामान हराएमा, चोरी भएमा सम्बन्धीत स्थानका स्थानीय प्रहरीसँग समन्वय गरी प्रहरी प्रतिवेदन उपलव्ध गराउने ।
– फौजदारी अपराध सम्बन्धमा स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा कारवाहीको लागि पठाउने साथै सो सम्बन्धमा सम्बन्धित राजदुतावास वा कुटनीतिक नियोगलाई जानकारी गराउने ।
– पर्यटकहरुको विरुद्धमा पर्यटन व्यवसायीहरुबाट आएको गुनासो छानविन, कारवाही र समझदारी सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
– पर्यटन तथा पर्यटक सुरक्षा सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुलाई अनुशिक्षण कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
– बन्द, हड्तालको समयमा पर्यटकहरुलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म सुरक्षितसाथ पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
– पर्यटकहरु कुनै पनि घटना, दुर्घटना एवं प्रकोपमा परेको सूचना वा जानकारी प्राप्त हुना साथ उद्धार कार्यका लागि सम्बन्धीत निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय एवं सहकार्य गर्ने ।
– विभिन्न ठाउँहरुमा अलपत्र परेका पर्यटकलाई उद्धार गरी सम्बन्धीत निकाय, दुतावास वा निजको आफन्तसँग सम्पर्क गराउने ।
– अबैधानिक रुपमा नेपाल प्रवेश गरेका तथा बसोबास गरेका विदेशी नागरिकहरुको अनुगमन तथा कारवाही सम्बन्धमा सम्बन्धीत निकायसँग समन्वय गर्ने ।
– बेवारिसे तथा मानसिक अवस्था ठिक नभएका विदेशी नागरिकहरु फेला परेमा व्यवस्थापनको लागी सम्बन्धीत निकाय तथा संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने ।
– पथ प्रदर्शन गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पथ प्रदर्शकहरुको जाँच गर्ने र अनुमती विना त्यस्तो कार्य गरेको पाईएमा नियन्त्रण गरि आवश्यक कारवाहीको लागी सम्बन्धीत निकायमा पठाउने ।
– इजाजत वेगर कुनै पनि विदेशी नागरिकले पर्यटकीय क्षेत्रमा व्यवसायिक रुपमा कुनै डकुमेन्ट्री वा चलचित्र वनाएमा निजलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धीत निकायमा कारवाहीको लागि पठाउने ।
– होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, र्याफ्टिङग लगायत विभिन्न पर्यटन व्यवसायीहरुमा निरीक्षण, जाँच, अनुगमनको कार्यमा सहयोग गरी राज्यले तोके बमोजिम कानूनी दायरा भित्र रहेको नपाईएमा त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई आवश्यक कारवाहीको लागी सम्बन्धीत निकायमा पठाउने ।
पर्यटनका घोषित कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन भएनन्
तल्लो मस्याङ्दी जलयात्रा बिस्तार गरिँदै !
जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान कम : पर्यटन बोर्ड सिइओ
आरोही लाक्पा शेर्पाको दशौं पटकको सगरमाथा आरोहण सफल
कञ्चनजङ्घा आरोहणका क्रममा एक भारतीय नागरिकको निधन
कतारी राजकुमारी आश्माद्धारा कञ्चनजङ्घा हिमालको सफल आरोहण